दशैं-तिहार”लगत्तै कांग्रेसले भ्रष्टाचारको विरो’धमा सडक तताउने…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दशैं, तिहारलगत्तै भ्रष्टा’चारको विरोधमा देशव्यापी रुपमा आ’न्दोलन गर्ने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकटका नेताहरुसँगको पराम|र्शमा यस्तो तयारी गरेका हुन् ।
देश संक’टमा भएको बेलामा पनि जताततै भ्रष्टाचार मौलाउनु सुखद छैन्, यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले टुलुटुलु हेरेर बस्नुहुँदैन्, हामी को’भिड–१९ को सं’क्रमणको जो’खिमलाई हेरेर अहिलेसम्म चुप लागेर बसेका थियौं । अब चाडपर्व सकिनेलगत्तै हामी सरकारको विरोधमा सडकमा जान्छौं।’–देउवाले आफूनिकट नेताहरुसँग भनेका छन।
कांग्रेसले यसअघि नै भ्र’ष्टाचारको वि’रोधमा सकडमा आउने निधो गरिसकेको थियो । तर, कोरोना सं’क्रमणको जोखि’मलाई मध्येनजर गर्दै ती सबै कार्यक्रम हाललाई स्थगित् गरेको जनाएको छ ।
सरकारले कोरोना संक्र’मण रोक’थाम तथा निय’न्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेरै पार्टीको तर्फबाट महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए
काठमाडौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरीको कार्यसम्पादन उच्च रहेको बताउनुभएकाे छ । गृहमन्त्री थापाले प्रहरकाे राम्राे कामलाई स्यावासी दिन किन कञ्जु’स्याइँ गरेकाे भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘नराम्रोलाई पटकपटक नराम्रो भन्न नहिचकिचाउने हाम्रो समाज राम्रोलाई शब्द खर्च गर्न किन कञ्जुस्याइँ गर्छ ? कुनै अ’पराधको घ’टना घट्दा हल्ला गर्ने समाज किन त्यहि घ’टनाको सफल अनुस’न्धनबाट प्रह’रीलाई स्यावासी दिन कञ्जु’स्याइँ गर्छ ?
देशको संरचनामा परिवर्तन चाहनेहरुले अब आफूमा, आफ्नो समाजमा र आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी भएकाे बताउनुभयाे । को’रोना भा’इरस र लक’डाउनले गर्दा नयाँ सुरक्षा चु’नौतिहरु सामना गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘को’रोना भा’इरस र लक’डाउनले गर्दा हामीले नयाँ सुरक्षा ‘ सामना गर्नुपरेकाे छ । यस विषम समयमा पनि प्रहरी जसरी निवार्ह गरेको छ त्यो प्रशंसनीय छ ।’
नेपाल प्रहरी आम नागरिकको संगठन भएकाे भन्दै समाज र राष्ट्रले समेत अधिक महत्व दिएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयाे । प्रहरीप्रतिकाे अघात आस्था र विश्वासको दियोलाई जोगाइराख्न प्रहरी इमान्दार र व्यवसायिक हुनुपनर्ने पनि बताउनुभयाे ।
Previous सुनसरीका प्रहरी निरीक्षक खनाल उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता…हेर्नुहोस् ।
Next दशैको मुखैमा नेपाली सेनाले गर्यो यती राम्रो निर्णय…हेर्नुहोस् ।